Notsapainay tsara ny Xiaomi Mi Band 1s | Androidsis
Amin'ity famerenana vaovao an'ny fitaovana Android ity, na amin'ity tranga ity, Gadgets mifanentana amin'ny rafitra fiasa Android, efa nandinika tsara ny Xiaomi Mi Band 1s izahay hanazava aminao, araka ny zavatra niainako manokana, ny zavatra rehetra miaraka amin'ity fehin-tànana manokana ity sensor amin'ny tahan'ny fo voaorina, fanoherana ny rano sy vovoka ary bateria maharitra tsy misy olana mandritra ny iray volana mahery ao amin'ny Standby, ary afaka mahazo izany amin'ny $ 29,99 US fotsiny isika, na izay mitovy amin'ny fiovana ankehitriny, mihoatra ny 28 Euros.
Ny zava-baovao izay anisany Xiaomi Mi Band 1s vaovao Raha ampitahaina amin'ny maodely teo aloha dia azo antoka fa azy io sensor amin'ny tahan'ny fo optika manaitra, sensor iray izay 30 segondra monja dia handray ny fitempon'ny minitra ao am-pontsika ary hitahiry azy ireo amin'ny tantara feno ao amin'ny fangatahana Android izay ananan'ity bracelet ity ary ilaina ny misintona azy avy amin'ny Play Store Google ho an'ny fampifanarahana. ary ny pairing ny mitovy.
1 Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi Mi Band 1s
2 Ny fiasa rehetra an'ny Xiaomi Mi Band 1s
Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi Mi Band 1s
modely Mi Band 1s
Fitaovana fananganana Firaka aliminioma-magnesium ho an'ny loha sy silika antiallergika ho an'ny fehin-tànana miovaova
Conectividad Bluetooth 4.0 manan-kery ho an'ny Android 4.4 sy avo kokoa ary ny iOS 7.0 sy ambony
Fomba hafa Vovoka IP67 voamarina fa mahatohitra vovoka sy rano ary sensor ho an'ny gravity
Lanja lanja 5 grama
Mametraha lanja Gramin'ny 14
bateria 45 mAh polymera lithium izay manome antsika iray volana any Standby
vidiny 29.99 $ - eo amin'ny 28 euro eo ho eo ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny.
Ny fiasa rehetra an'ny Xiaomi Mi Band 1s
Ankoatra ny fahefana raiso ny tahan'ny fony ao anatin'ny 30 segondra avy ao am-ponay ary mitahiry ny valiny ho azy noho ny fampiharana Xiaomi Mi Fit, ity fehin-tànana manokana ity, dia manome zavatra mahaliana ho an'ireo izay hotanisaiko etsy ambany:
Raiso ny fitepon'ny fonay ary tehirizo ao anaty tantara ao anaty rahona noho ny kaonty Xiaomi anay, kaonty iray izay tena ilaina mba hahafahanao mifangaro sy manomboka mankafy ny Xiaomi Mi Band 1s.
Pedometer na counter counter miaraka amin'ny fahafaha-manisy marika tanjona isan'andro ankoatra ny angon-drakitra voatahiry ao amin'ny tantaran'ny kaonty Xiaomi anay.
Metatra fatoriana sy ny kalitaony. Ny tahirin-kevitra koa dia voatahiry ao amin'ny tantarantsika ao anaty rahona.
Fanairana Smart izay mamoha anao amin'ny fotoana mety ka manaitra araka izay azo atao ny mifoha.
Fampandrenesana amin'ny alàlan'ireo jiro fotsy sy jiro fotsy telo an'ny fampiharana efa nofidina taloha avy amin'ny fampiharana Mi Fit.
Fampandrenesana amin'ny alàlan'ny LEDS sy ny hovitrovitra amin'ny antso ho avy.
Ny hevitro manokana momba ity fehin-tanana ara-batana na ara-batana ity dia mety tsy ho tsara., ary ny fanesorana ny fiasan'ny sensor ny tahan'ny fo mampihetsi-po, izay ny fampandehanana tsara indrindra hitako amin'ity Xiaomi Mi Band 1s ity, ny metatra feno kalitaon'ny torimaso feno ary ny fanairana mahira-tsaina azy ireo dia niafara tamin'ny nanaitra ahy loatra ka lasa natory aho. isak'alina miaraka amin'ny fehin-tànana mba hahitana ny valiny ny ampitso maraina ary hamonjy azy ireo tsara amin'ny tantarako ao anaty rahona.
Raha fintinina a fitaovana fampitaovana mampihetsi-po amin'ny specs avo be amin'ny vidiny izay toa takatry ny saiko saika ny toe-karena rehetra ka mety ho lasa iray amin'ireo gadget ara-teknolojia be mpividy indrindra amin'ny vanim-potoana, ary vao mainka aza raha mieritreritra isika fa efa akaiky ny fialantsasatry ny Krismasy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Notsapainay tsara ny Xiaomi Mi Band 1s
Aleo apetrakao MI BAND PULSE, iza no anarana ofisialy, sa?
Ny anarana ofisialy dia Xiaomi Mi Band 1s.
Juan A. Pérez Garcia dia hoy izy:
Lazaiko aminao, rehefa misy fisalasalana fa efa niainanao tamin'ilay lohahevitra ... marina ny "vozona", dia ny fampiasana ny tarika 1S miaraka amina pendant pendant, fa tsy amin'ny brasele, dia angataho ianao hanondro, satria handray ny refy amin'ny fomba hafa ....
Valiny tamin'i Juan A. Pérez García
Misaotra namana amin'ny fanamarihanao.
CatLand dia hoy izy:
Efa nojerenao ve ny maha-azo itokiana ny refin'ny fo tahan'ny fo amin'ny fampitahana azy amin'ny fehin-tratra toy ny Polar na zavatra toa izany?
Ireo metatra maivana ireo dia manana ny lazany ho diso mandanjalanja sy tsy marina amin'ny fandrefesana azy indrindra rehefa manao fanatanjahan-tena ary misy fiovana be.
Valio amin'i CatLand
Izy io dia metatra azo itokisana indrindra satria nampitahako azy mivantana tamin'ny Tensiometer an'ireo izay mitondra ny pulsanao amin'ny valva-drivotra izay mivonto ao anaty sandry ary tsy misy mahasamihafa azy roa, fahasamihafana indrindra.
Ilay Polar nolazainao tamiko dia azo antoka fa mahomby kokoa amin'ny atleta fa lafo kokoa noho ireo 28 Euros ireo ihany koa.
Fco Javier Ferruses (@ferrus) dia hoy izy:
Fanadihadiana mampalahelo inona. Ny kalitao dia mitovy amin'ny teo aloha ihany? Farany moa ny fangatahana amin'ny teny espaniola?
Navalin'i Fco Javier Ferruses (@findrana)
Fco Javier, raha nahita ny horonantsary ianao dia ho tsapanao fa ilay fampiharana ampiasaiko, miorina amin'ny original sy avy amin'ny HTC manía, dia voadika amin'ny teny Espaniôla tanteraka.
Fadf dia hoy izy:
Salama maraina Francisco. Omaly aho dia nahazo ny fehin-tànako ary nanandrana nametraka ny fampiharana toa anao aho, miaraka amin'ny maody mihazakazaka sns ary tsy misy fomba.
Afaka manampy ahy ve ianao? Tsara izany.
Mamaly an'i Fadf
aiza no azonao ividianana ireo 1s? satria tsy mahita toerana fivarotan-dry zareo aho, efa amidy avokoa ny zava-drehetra
Taiza no nividiananao azy na aiza no amarotany azy? 25 € ve no vidinao? aiza izany?
Mandrefy ny taham-po mandeha ho azy ve izany sa mila mangataka izany?
Raha atorinao ao amin'ny horonantsary dia mbola tsy afaka nahita azy aho, ary miala tsiny.
Tsy maintsy ampirisihinao izy hanao izany amin'ny fampiharana finday, ny hany fampiasa mampiasa ny hatetika dia ny metatra fatoriana.
Salama. Namaly ahy ny mpivarotra androany. Milaza izy io fa ny tahan'ny fitempon'ny fonao dia tsy refesina fotsiny manomboka amin'ny 22:00 alina ka hatramin'ny 1 ora aorian'ny mifoha anao. Mila mamaly aho raha ireo fandrefesana ireo, izay ataony isaky ny 2 minitra, dia hita avy eo amin'ny fampiharana, toy ny ao amin'ny Fitbit Charge HR. Ny tsy azoko dia ny antony tsy refesina tsy an-kijanona mandritra ny andro satria hitohy maharitra na lava kokoa ny bateria noho ny Charge HR. Heveriko fa ireo fanatsarana ireo dia ho tonga amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny firmware. Ny marina fandrefesana raha oharina amin'ny Apple Watch dia tena marina, fa tsy amin'ny fanazaran-tena mitaky. Raha tsy mampiditra fandrefesana maharitra 24 ora izy ireo dia heveriko fa ho teboka malemy indrindra hisarihana ireo mpividy. Ny tanana faharoa dia azonao atao ny mahazo ny Charge HR manodidina ny 80 euro ary miantoka an'io asa io ianao. Ankehitriny dia heveriko fa ny dingana manaraka dia ny Mi Band miaraka amin'ny efijery monochrome kely izay tsy manimba ny fiainana bateria. Matoky aho fa havoaka afaka volana vitsivitsy ... ny fivoarana lozika io.
Valiny amin'i PAblo
Misy rohy mividy azy?
Ao amin'ny vozona dia azo apetraka koa izy io satria misy rojo vozona.
Salama, ilaina ve ny mampifandray azy amin'ny Bluetooth maharitra hanomezana ny famakiana pulsa?
Beñat dia hoy izy:
Azonao atao ve ny mamela anay ny rohy hampidina ny rindranasa amin'ny teny Espaniôla miaraka amin'ny asan'ny fandrefesana pulsa?
Ao amin'ny horonantsary lazainao fa alainao amin'ny htcmania fa tsy hitako.
Valiny tamin'i Beñat
Manana GPS azo ampiharina ve izy io? Ny tiako holazaina dia ny manisa ny fotoana amin'ny tehezan-tendrombohitra sy ny hafa….
yourActivityBracelets.com dia hoy izy:
Tsy manana GPS izy io, mampiasa pedometer handrefesana ny halavirana. Somary misy metatra mitaky fo ihany raha raisina ho bracelet izay efa azo vidiana amin'ny vidin'ny € 30. 😉
Valio ny yourActivityBracelets.com
Cesc Freixas dia hoy izy:
Azonao avela ve ny rohin'ny rindranasa?
Valiny tamin'i Cesc Freixas
Salama. Ny tranokala izay anoloranao tena hividianana fehin-tànana, Geekbuying, azo itokisana ve? Nahita ny bracelet koa aho tany Amazon fa 50 € ny vidiny ary tsy azoko ny fahasamihafan'ny vidiny. Misaotra betsaka. Miarahaba.
Mampiasa ny rindrambaiko Xiaomi Mi Fit aho saingy tsy azoko atao izany handraketana ny cd ny tahan'ny fitepon'ny fony dia anontaniako amin'ny alàlan'ny fampiharana izany ... Tsy fantatro raha hisy izany satria mitondra azy amin'ny Samsung S3 miaraka amin'ny Android 4.3 aho. .. na dia ny fitaovana sisa aza.
Salama… ami m zavatra mitovy amin'izany ... nahavita namaha azy ve ianao ??… ..mba km manao ahoana ??… misaotra… miarahaba
Todosamartwatches.com dia hoy izy:
Toy izany koa no nanjo ahy, nisintona rindranasa maro samihafa aho ary tsy nahavita naka an'izany hanoratra ny fitempon'ny foko, araka ny hevitro heveriko fa be loatra ny endri-javatra ho an'ny vidiny ...
Mamaly an'i Todosamartwatches.com
Mila misintona ny App Mi Fit ofisialy avy amin'ny Google Play Store fotsiny ianao.
JOHN Carlos GB dia hoy izy:
Salama, manana olana aho, nanova ny findaiko aho ary izao miaraka amin'ny Xiaomi Mi4c dia tsy mifanentana amiko ny fehin-tànana (mila mikoty ianao amin'ny marika mitovy). Hita fa nifanandrify tamiko ny BQ aquaris E4, saingy nanana ny olana aho fa tsy hita ny bokotra maso ny tahan'ny maso raha tsy hita ilay efijery 4,5 ”. Ka, misy sosokevitra ???
Valiny amin'i JUAN Carlos GB
Xk tsy mandrefy ny tahan'ny fo ary milamina ny zavatra hafa rehetra
Manana herinandro miaraka aminy aho, mandeha tsara nefa ny app ao amin'ny magazay iPhone dia tsy miaraka amin'ny metatra tahan'ny fo, misy mahalala ny fomba ahazoana azy amin'ny android raha misy ny fomba fa ho an'ny iOS dia mbola tsy haiko ny fomba Vonjeo !!!
Kevlpzz dia hoy izy:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1129483 (ao amin'io forum io dia misy fampahalalana sy fomba iray hampiasana ny sensor-ny fo amin'ny fomba tsara kokoa)
Mamaly an'i Kevlpzz
Manana izany aho nividy sy miasa. Na dia marina aza fa bracelet 30 euro izy ary raha ampitahaintsika amin'ny Fitbit na Garmin HR dia very izany, noho io vidiny io no tsara indrindra azonao ampiasaina amin'ny akanjo azo ampiasaina amin'ity karazana ity.
wadewearables dia hoy izy:
Toa ny Xiaomi's izao dia hamoaka kinova vaovao amin'ity fehin-tànana ity, ny Xiaomi Mi Band 2, miaraka amin'ny fanatsarana vitsivitsy sy ny efijery LCD mifangaro. Raha toa ka tsy ampy amin'ny vidiny ananany ireo kinova ireo ...
Valiny amin'ny vadewearables